बलात्कारको बढोत्तरी किन ? « Khasokhas
‘समाजमा बलात्कारको बढोत्तरी किन ?’ भन्ने विषयमा विमर्श गरी रहँदा नेपालको कुन कुनाकाप्चा, कुन शहर, कुन गाउँ, कुन घर, कुन गल्ली, कुन स्कूल, कुन होस्टेल, कुन होटेलमा बलात्कार वा बलात्कारको प्रयास भइरहेको होला ? वा बलात्कार पछि मारिँदै होलान् ? भन्ने प्रश्न, चिन्ता, त्रास र दर्दनाक अनुभूतिका साथ यो कार्यपत्र प्रस्तुत गरिदैछ । किनभने प्रहरीकै रिपोर्टअनुसार नेपालमा बलात्कारका घटनाहरु दिनप्रतिदिन बढिरहेका छन् । नेपाल प्रहरीको तालिका हेर्नुहोस ।
माथिको तालिकाले सबैलाई थप संवेदनशिल किन बनाएको छ भने भविष्यको कर्णधार बालिकाहरु सबैभन्दा बढि जबरजस्ती करणीको शिकार बन्दैछ ।
विश्वमा ३mभ)तयय mयखझभलत चलिरहेको छ । नेपालमा भने महिलामाथिको चरम हिंसा बलात्कार हुँदै हत्याको पाशविक दुश्चक्रमा फसिरहेको छ । सरकारी तथ्यांकहरुका अनुसार नै यो क्रम दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । जति–जति बलात्कार जघन्य र पाशविक बन्दै जान्छ त्यति–त्यति यसले यौनप्रेरित हिंसाको घेरा तोड्दै अन्य हिंसाको रुपमा बदलिँदै गएको देखिन्छ । जब बलात्कार घटनाबाट प्रवृत्ति बन्छ, अनि प्रवृत्तिबाट पहिचान बन्न जान्छ, अनि प्रश्न उठ्छ– महिला बलात्कृत हुनु भनेको समाज बलात्कृत हुनु अनि सिंगो राष्ट्र बलात्कृत हुनु होइन र ?
बलात्कार एउटा यस्तो उत्पीडित माथि थप उत्पीडनको हिंसा हो जसलाई प्रश्न गर्दा थप प्रश्न तेर्साइन्छ, जब सजायँ दिन खोज्दा थप आफैँ सजायको शिकार हुन जान्छ । जब परिवार, समाज र सरकारको निकायसँग न्यायको भीख माग्दा थप भिखारी हुन जान्छ । त्यस्तै जब सुरक्षित स्थान माग्न जाँदा थप घरबारविहिन हुनजान्छ । जब लाज छोप्न खोज्दा बाँकी रहेको लाज पनि उदांगो पारिदिन्छ । यसको परिणाम बलात्कृत महिला पलपलमा मर्छिन् । उनको हत्या नभएपनि अन्तिममा आत्महत्या गर्न बाध्य हुन्छिन् ।
अनि दोष कसको ? महिलाको ? पुरुषको ? परिवारको ? समाजको ? राजनैतिक पार्टीको ? सरकारको ? राष्ट्रको ? विश्वको ? अर्थात् यसलाई समग्रतामा बुझ्नु जरुरी छ । यसको वैचारिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक पाटो उजागर गर्न जरुरी छ । बलात्कारभित्र सुक्ष्म ढंगले लुकेको जातीय विभेद, दलित विभेद, वर्गीय विभेद इत्यादि उदांगो पार्नु जरुरी छ । समस्या उजागर मात्र नगरी समस्याको समाधान पनि दीर्घकालीन र तत्कालीन गरी खोज्नु जरुरी छ ।
नेपालमा सामन्तवादको नाइके राजतन्त्र त फ्याँकियो तर सामन्तवादको अवशेषहरु धेरै बाँकी छ । सामन्तवादको अवशेषले गर्दा यहाँ महिलालाई परिवार, समाज, समुदाय, नश्लको पवित्रताको प्रतिकको रुपमा लिइएको हुन्छ । पुरुष, परिवार, समाज, समुदाय, नश्ल र वर्गको निरन्तरतालाई जोगाईराख्न बच्चा पाउने साधनको रुपमा लिएको हुन्छ । तसर्थ, महिलालाई लजालु बनाएर लुकाउने र निजी साधनको रुपमा घर गृहस्थिमा सीमित राख्ने गरिन्छ ।
यतिखेर हामी युद्धको बेला हुने बलात्कारको कुरा गरिराखेका छैनौं । घरभित्र आफ्नै परिवारभित्र, आफन्तबाट बलात्कारमा शिकार भइरहेको कुरा गर्दैछौं । यहाँ वयस्क पुरुषद्वारा वयस्क महिलामाथि हुने यौंन हिंसाको कुरा मात्र गरी राखेका छैनौं । यहाँ हामी बुवा, हजुरबुबाको उमेर भइसकेको व्यक्तिले यौवन, यौन र योनि उच्चारणसम्मगर्न नसकेमा नाबालाकमाथि बलात्कार गरेको घटनाको बारेमा बुझ्न खोज्दै छौं । यहाँ हामी नाति उमेरको एक हिंस्रक पुरुषले हजुरआमाको उमेर भएकी महिलामाथि बलात्कार गरेको प्रश्न उजागर गर्न खोज्दै छौं । यहाँ हामी सबल पुरुषहरुबाट अपांगता भएका महिलामाथि पाशविक बलात्कारको कुरा गर्दैछौं ।
यहाँ हामी बालकहरुबाट बालिकामाथि बलात्कार भैरहेका कुरा गरिरहेका छौँ । आखिरमा यो समाज किन यसरी पतन भएको, निरिह भएको, पाशविक भएको र विवेकहिन बनेको ? सरकारको गलत आर्थिक नीतिले गर्दा यूवा–यूवतीहरु बैदशिक रोजगारमा जान बाध्य छन् । यसले थप परिवारमा बिखण्डन, विचलन ल्याएको छ । यसले देशमा मात्र होइन विदेशमा समेत महिलाहरु बलात्कृत हुन पुगेका छन् ।
देशभित्र ग्रामिण अर्थतन्त्र धरासायी बन्दै गएको छ । बढ्दो शहरीकरणले औद्योगिकरण ल्याउनुको सट्टा उपभोग केन्द्रित मात्र बनाएको छ । रोजगारी नपाउँदा युवाहरु विदेशिन बाध्य भएका छन् । यसले एकातिर परिवारको संरचनालाई भत्काइदिएको छ । परिवारभित्र उपभोक्तावादी संस्कृति मौलाइरहेको छ । शहरभित्र पसेमा श्रीमतीहरु उपभोगवादी सँस्कृतिको शिकार बनिरहेका छन् ।
खाली दिमाग शैतानको घर भने झैँ श्रीमानले पठाएको रेमिट्यान्सले परिवार बनाउनु भन्दा बिगार्नेतिर उन्मुख गराइरहेको छ । बच्चाहरु सानैदेखि मोबाइल र कम्प्युटरमा भिडियो गेममा लिप्त, बयस्क हुँदै गएपछि मदिरा, लागू पदार्थ खानमा लिप्त भैरहेछन् । त्यसमाथि पढेता पनि काम नपाउँदा तिनीहरु हिंस्रक बन्न बेर हुन्न ।
जब बलात्कारको घटना हुन्छ तब विचौलियाहरु मेलमिलापको नाममा बीचमा बसी दुवैबाट पैसा खान्छन् । यसरी पठाएको रेमिट्यान्सले उत्पादन क्षेत्र पाउँदैन, लगानी गर्न पाउँदैन । तब त्यही पैसा विलासितामा खर्च हुन जान्छ । जुवातास, रक्सी, लागू पदार्थ, यौन उत्तेजक संस्कृति आदिमा । बेरोजगारले हिनताबोध जन्माउँछ । आत्मसम्मान गुम्न पुग्छ र आक्रोस निम्त्याउँछ । रक्सी, मदिरा, लागू पदार्थ, अश्लिल फिल्म, गीतनाँचले मान्छेलाई जनावर बनाइदिन्छ ।
यतिखेर धेरैजसो राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले अहिले नेपालको चरण आर्थिका विकासको चरण भनिरहदाँ उत्पादक शक्ति जन्माउने र आफैँ पनि उत्पादन शक्तिको श्रोत महिलाहरु बलात्कृ‘त भइरहेकोछ । महिलाको लिंग पहिचान पश्चात भ्रुण हत्या भइरहेको छ । त्रास र आशका साथ बाल विवाह बढ्दै गैरहेको छ । बढ्दो बेरोजगारीलेदाइजो प्रथा बढ्द,ै विवाह र अनमेल विवाहको साथै घरेलु हिंसा बढ्दै गैरहेको छ । यो कहिले सम्म चल्न दिने ?
जब देशको नेतृत्व गर्नेहरुमा बैचारिक प्रश्न प्रष्ट हुन्नm र।जनीतिक क्षेत्र सत्ता केन्द्रित हुन्छ जब देशको अर्थतन्त्र बिग्रन्छ, त्यसले समाज र सँस्कृतिलाई पनि दिशाहिन गराइदिन्छ । यसले अन्ततः मनोविज्ञानलाई असर गर्दछ । बलात्कारमा हुने अस्वभाविक कृयाकलाप, हिंसा त्यसको परिणाम हो । यसले गर्दा नै अत्यासलाग्दो बलात्कारका घटना सुन्नमा आउँछ ।
यस्तो अवस्थामा बलात्कार सिधै यौन तृप्तिको कारण मात्र नभएर हिनताबोध, भय र मानसिक रोेगको अप्रत्यक्ष अभिव्यक्ति हुनजान्छ । यसले बलात्कारको रुपलाई नै अझ अस्वभाविक, संवेदनहिन र क्रुर बनाउँछ । यसरी जब आधा आकाश थाम्ने महिलाहरु त्रसित मनोबैज्ञानिकको शिकार हुन्छन्, तब आधा धर्ती ओगटेका पुरुषहरु कसरी शान्तरुपमा बस्न सक्छन् र ?
माथिका सबै विश्लेषणहरुले के भन्छन् भने जघन्य बलात्कार त लक्षणमात्र हो । गहिरिएर हे¥यौँ भने यो मुलुक असफलतातिर लम्किदै छ । यहाँ शासकिय प्रणालीले स्थायीत्व लिदैन, विधिको शासन छैन । दण्डहिनता छ राम्रो गर्नेले पुरस्कार पाउँदैन । यसो हेर्दा सबै चिज छ, तर सबै चिज छैन । राज्यको विभिन्न निकायविच समन्वय छैन । कति स्थानमा ओभरल्यापिङ छ । सरकारी संयन्त्र झन कमजोर हुँदै गएको छ । तसर्थ यो रोगको उपाय दीर्घकालीन र तत्कालीन रुपमा खोजी गर्नु जरुरी छ ।
जबसम्म समाजमा पर्याप्त वस्तस र सेवाको उत्पादन र तिनको न्यायपूर्ण वितरण हुन्न तबसम्म हामी स्वतन्त्रताको दुनिँयामा हैन, बाध्यताको दुनियाँमा रहनुपर्ने हुन्छ । अभावले भरिएको जिन्दगीले सधैं सबैतिर कोपर्न बाध्य गराउँछ । साथै समावेशीता बिनाको सम्पन्नताले त्यो दीगो मात्र हुँदैन, त्यसले समाजमा असन्तुलन र अशान्ति ल्याउँछ ।
तसर्थ, उन्नत समाज र स्वतन्त्रताको दुनियाँमा पुगेर मात्र सत्ताको औचित्य सिद्धिन्छ, त्यसको साथसाथै हिंसाको औचित्य पनि सिद्धिन्छ । त्यो दुनियाँ ल्याउनको लागि वस्तु र सेवाको उत्पादनको घेरा धेरै गुना बढाउनुपर्छ र साथै उत्पादन सम्बन्ध र वितरण प्रणालीलाई अझ समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामुलक बनाएर लैजानुुपर्दछ । त्यो एउटा लामो प्रक्रिया हो । साथै तत्काल के के गर्न सकिन्छ त्यो गर्दै जानुपर्दछ ।
नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान बनेको छ । यद्यपि, यो संविधान अपूर्ण छ । कतै त्रुटिपूर्ण पनि होला । तर यो संविधान जनताले बनाएको संविधान हो । यो संविधानमा गणतन्त्र, लोकतनत्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशीता र समानुपातिकतालाई स्वीकारिएको छ । तर, अझै यसलाई कार्यान्वयन गर्ने चुनौती छ । यसको लागि राज्यको संरचना दिगो र बलियो हुनुपर्दछ ।
विधिको शासन हुनुपर्दछ । दण्डहिनताको अन्त्य हुनुपर्दछ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलाई संविधानमा मौलिक हकमा राखिएको छ । यो कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । यो कार्यान्वयन भयो भने आधाभन्दा बढी समस्या समाधान हुन्छ ।
संविधानको मर्मको कार्यान्वयन पक्ष अब सरकारमा मात्र होइन, हरेक पार्टीभित्र कार्यान्वयन हुनुपर्छ । अनि त्यसभित्र महिलाको आवाज सँगसगै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, दलित आदिको आवाज सुन्ने वातावरण तयार हुनुपर्छ । पार्टीभित्र तिनीहरुको स्थान संविधानमा लेखेको आधारमा कमसेकम कार्यान्वयन हुनुपर्दछ ।
तत्काल सरकारले जघन्य बलात्कारका दोषीहरुलाई कडा दण्ड दिनुपर्छ । जहाँसम्म सरकारको कुरा छ, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराध रोक्नको लागि नियम विनियम, ऐन बनाउने तयारीमा भएको देखिन्छ तर अत्यन्तै सुस्त छ । त्यस्तै महिला आयोग अब अधिकार सम्पन्न बनेको छ तर यो हालसम्म नेतृत्वविहिन भएर बसेको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा गतवर्षमात्र बलात्कारका ३१७ मुद्दा मध्ये ३९ को मात्र फैसला भएको छ । यसर्थ, यसकोे लागि पहिलेदेखि माग हुँदै आएको र सर्वोच्चको बेञ्चले समेत परमादेश दिएको परिवार अदालत, फास्ट ट्र्याक अदालत जस्ता संयन्त्रको छिटो गठन गर्दै कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । संविधानको मौलिक हकको प्रावधानलाई पालन गर्नेतिर सबैले जोड दिनुपर्छ ।
अनि मात्र नयाँ नेपालको कल्पना गर्न सकिन्छ । नयाँ महिला÷पुरुष सम्बन्ध स्थापित गर्न सकिन्छ । अनि समावेशी नेपाल सोच्न सकिन्छ । त्यसनिम्ति महिला र उत्पीडित समूहहरुले निरन्तर आवाज उठाइरहनुपर्छ । दबाब दिइरहनुपर्छ । संघर्ष गरिरहनुपर्छ ।
म्यादीको बेनी नगरपालिका–३ भकिम्लीको स्वर्गाश्रमबाट म्याग्दी र मुस्ताङका सातवटा तीर्थस्थलको दर्शन गर्न सकिने नयाँ तथ्य
संसद् सचिवालयकी एक महिला कर्मचारीलाई यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोपमा हिरासतमा रहेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराले